Hetauda Khabar - हेटौंडामा 'मकवानपुर साझा यातायात' संचालन हुदै, सहचालक महिला !
हेटौंडामा 'मकवानपुर साझा यातायात' संचालन हुदै, सहचालक महिला !
हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बस संचालन हुने भएको छ ।
मकवानपुर साझा यातायात प्रालिले यहि असार २ गतेबाट 'मकवानपुर साझा यातायात' बससेवा संचालन गर्न लागेको हो । ३ वटा रुट छुट्याएर ११ वटा बस संचालन गर्न लागिएको मकवानपुर साझा यातायातका संचालक भेष खड्की बताउनुभयो । बुद्धचोक नवलपुर मनहरी, बुद्धचोक-क्याम्पाडाडा-हुदै हटिया-चिसापानी-कमाने र बुद्धचोक औधोगिक क्षेत्र हुदै छालागेट सम्म बस सेवा संचालन हुनेछ ।
२६ वटा सिट रहेको बसमा बिहान ५ बजेदेखि राति ८ बजे सम्म यात्रुहरुले आरामदायी यात्रा गर्न सक्ने संचालक खड्गीले बताउनुभयो । 'प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा हो तर यहाँको नगरभित्र आज सम्मपनि बससेवा संचालन भएका छैनन्, सर्वसाधारणलाई सास्ती भैरहेको छ, त्यसैले पनि बस संचालनमा ल्याउन लागेका हौँ', खड्गीले भन्नुभयो । बसका चालक र सहचालकलाई पोशाकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । बुद्धचोकलाई केन्द्रमानेर हरेक २० मिनेटको अन्तरमा बस छुट्नेछन् ।
मकवानपुर साझाका अनुसार केहिदिन पछी बिशेषगरी बिहान क्याम्पस आउने बिद्यार्थी र बिहानै बजार आउने सर्वसाधारणलाई सहज हुनेगरि मनहरी र चिसापानीबाट २-२ वटा बस छुट्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
बस संचालन हुने भएपछी यहाँका अटोरिक्सा र मयुरिको मनपरी भाडाबाट आजित बनेका सर्वसाधारणलाई केहि राहत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी यहाँ संचालित साना सवारीको जोखिमपूर्ण यात्राबाट पनि यात्रुहरु मुक्त हुनेछन् ।
असार २ गतेदेखि संचालनमा आउने मकवानपुर साझा यातायातमा सहचालक महिला हुनेछन् । ११ वटै बसको सहचालकको रुपमा महिलाले भाडा उठाउछन् तर बिहानी सिफ्टमा मात्र । महिला भनेपछि घरमै बसिरहने, घर भित्रकै मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई निरुत्साहित गर्दै बिहान ५ बजेदेखि १२ बजेको बिहानी सिफ्टमा महिला सहचालक रहने मकवानपुर साझाले बताएको छ ।
मकवानपुर साझा यातायात प्रालिले छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । बिद्यार्थीहरुलाई भने ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
बिद्यार्थी छुट ३० प्रतिशत मात्र किन?
मकवानपुर साझा यातायातको स्थानीय रुट र भाडादर पत्रिकामा प्रकाशित भएपछी केहि विद्यार्थीले सरकारले छुट्याएको ४५ पतिशत भाडा छुटको व्यवस्थालाई कार्यनयन गरिएन भन्दै सामाजिक संजाल मार्फत बिरोध पनि भएको छ । तर मकवानपुर साझा यातायातको भाडा जनतालाई मार नपर्नेगरी कायम गरिएकोले बिद्यार्थीलाई ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको संचालक भेष खड्गी बताउनुहुन्छ ।
हेटौंडाको समृद्ध समाज राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित मकवानपुर साझा यातायातको रुट तथा भाडादर यस्तो छ हेर्नुहोस ।